Sida loo Download Slacker Radio u offline Radidiyaha
> Resource > Download > Sidee loo Diiwaan Slacker Radio leh Loss Tayada Zero
Slacker ayaa ku soo laabtay garoonka dagaal ee hoorto adeegyada music on February 13, 2013, soo food saartay caqabad ka Pandora ah. Laakiin waxba ka cabsi qaba tan iyo markii ay la qabsado istaraatijiyad suuq ah oo uu helay awooda. Tusaale ahaan, waxaa uu bixinayaa 10 jeer tirada songs sida Pandora. Sida laga yaabo in ay la filayay, Slacker ku dhawaaqay war ah oo 6 million users cusub on May 8th.
All oo dhan, Slacker waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashada aad u hoorto adeeg music. Waa maxay dheeraad ah, waxaad samayn kartaa oo aad la wadaagto music aad kartoo ku yaal. Laakiin waa nixi ah in aadan kala soo bixi kartaa radio Slacker sida aad rabto. Ma jiraa hab ka soo baxay? Sure, halkan waa qalab weyn oo lagu taliyey. The Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio u qoraan karaan radio Slacker la eber tayada khasaaro. Intaa waxaa dheer, waxa ay keeneysaa in la abuuro ringtones iyo edit macluumaadka ka mid ah heesaha bixi. Bal aan waqti lahayn oo ka eegi kartaa tutorial faahfaahsan hoos ku qoran.
1 Ku rakib oo taariikhqorihii ahaa radio Slacker
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer. Waa in aad dooratid mid ka mid sax ah oo ku haboon your computer. Waxaan ka hadli doonaa version daaqadaha ee qodobkan tan iyo labadii wadaagaan hab ay shaqo isku mid ah.
2 Bilow inaad kala soo baxdo radio Slacker
Burcad barnaamijka dib markii la rakibey iyo saxaafadda Record button on geeska bidix ee kore ee suuqa hoose si aad u hesho diyaar. Ka dib markii in, slacker.com u furan qulquli music aad rabto. Marka ay hees bilaabo inuu u ciyaaro, barnaamijkan u Qoraynaa doonaa eber tayada khasaaro. Oo waxa aad wax u maqli waa waxa lagu siiyo.
Waad haysan kartaa ciyaaro saldhigga music oo dhan si joogto ah. Tani radio downloader Slacker u qoraan karaan heesaha oo dhan iyo dhali files music oo kala duwan sida wakhtigii aamusnaan dhexeeya. Mid ka mid ah wax muhiim ah in la xasuusto inta lagu guda jiro geeddi-socodka lagu duubo waa in la joogteeyo xiriir ah oo internet weyn.
3 Bedelka music ka soo dejisan in Lugood
Qaar badan oo idinka mid ah oo laga yaabaa inuu u ciyaaro music ku saabsan iPhone ama iPad. Markaasuu u baahan tahay in aad marka hore lagu wareejiyo music si ay Lugood. Waa mid aad u fudud barnaamijkan. Taga laybareeriga si loo muujiyo song iyo riix Add Lugood in badhanka hoose. Markaas song ee playlist SAR ee Lugood aad ka heli karto.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in ay helaan heesaha on your computer, kaliya xaq guji heesta dooro Open ee Folder. Markaasay aad nuqul karo iyo paste files music ah ciyaartoyda kale ee warbaahinta.
Sidii hore u soo sheegnay, taas oo taariikhqorihii radio Slacker sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ringtones iyo edit macluumaad song. In la abuuro ringtones, waxaad u baahan tahay riix giraanta ka icon dhexe ee item heesta dooro qayb ka mid ah oo aad jeceshahay in bitmap ah taasoo keentay in ugu hooseysa. Barnaamijkan smartly ka heli kartaa macluumaad ku dhex gabyaan iyagoo kasta. Laakiin haddii aad rabto in aad ku darto macluumaad kale, waxaad u baahan tahay inaad xaq u riix song iyo View Detail xusho. Markaas buuxi duurka tafatirka macluumaad kasta oo aad jeceshahay in aad ka.
Waxay u egtahay weyn, soo maaha? Waa maxay sababta aan kala soo bixi mid u leedahay adigu isku day? Waxaad sii socotay inay u jeclahay.
Hoos ka eeg tutorial video ah:
Sida loo Download 8tracks Music
3 Siyaabaha Download Deezer Music
Habka ugu fiican ee Free Download / Record Pandora Music
Abuur, Share and Download Spotify playlist
Top 25 Kartuunka Goobaha si fudud Raadi iyo Watch Kartuunka Videos
Netflix Iyo Hulu Plus: Waa kuwee ka mid ah Haddii aad doorato inaad
Jidadkiisa oo dhammu waa inay Download Videos Facebook u PCMobile Phone
Top 5 MSN video downloader - Download MSN video si fudud oo dhaqso
Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Spotify Premium
Savevid u Mac: Online Video Download la One Click (Yosemite mid)
Sida loo dar ID3 Tags in MP3 Faylal ay si sahlan
Sida loo Download VH1 Videos la Click ah